सिद्धार्थ शुक्लाको मृत्युपछी अस्वस्थ रहेकी ‘हिना खान’ ले गरिन यस्तो पोष्ट , को हुन् हिना खान ? | समाचार
September 7, 2021 NepstokLeaveaComment on सिद्धार्थ शुक्लाको मृत्युपछी अस्वस्थ रहेकी ‘हिना खान’ ले गरिन यस्तो पोष्ट , को हुन् हिना खान ?
काठमाडौं । बिग बोस शो भारतभर प्रख्यात छ। मानिसहरु यसलाई ठूलो उत्साह संग हेर्छन्। यस शो मा आउने हरेक प्रतियोगी शो मा साथ साथै व्यक्तिगत जीवन मा राम्रो मित्रता छ। आज हामी सिद्धार्थ शुक्ला र हिना खान को मित्रताको बारेमा कुरा गर्दैछौं। हिना आफ्नो मिलनसार ब्यवहारको कारण सबैभन्दा राम्रो हुन्थिन्। तर यदि हिना बिग बोस मा एक विशेष मित्रता थियो, तब उनी सिद्धार्थ संग थिए। हिनाले यस्तो असल साथीले संसार छोडेको दु: ख बिर्सन सकेकी छैनन् , र यसकारण, उनको स्वास्थ्य पनि बिग्रेको छ।